Aya ndiwo akanakisa mawatchwatches aunogona kutenga
Parizvino, smartwatch yakanakisa yevashandisi veApple ndiyo Samsung Galaxy Tarisa Anoshanda 2. Yakagadzirirwa nharembozha dzeSamsung asi inomhanya mushe pamidziyo yese yeApple uye ine smartwatch yese uye maficha maficha aungatarisira. Iyo compact uye yakapepuka asi ichiri kupa hupenyu hwakanaka hwebhatiri. Asi kana usiri mune iyoyo, nhau dzakanaka ndedzekuti kune zvimwe zvakawanda zvinoshamisa sarudzo kubva kuFossil kuenda kuGarmin kuenda kuFitbit uye nezvimwe.
Akanakisa smartwatches nekutarisa
Samsung Galaxy Tarisa Anoshanda 2 - Iyo Galaxy Watch Inoshanda 2 yakanaka kune vese vashandisi veApple, kwete chete varidzi vefoni veSamsung, iine mwero unoshamisa wezvinhu, hupenyu hwebhatiri, uye aesthetics.
Samsung Galaxy Tarisa Inoshanda - Kana iwe uchida chimwe chinhu chakachipa uye uchida mamwe ma sensors, iyi ndiyo yako sarudzo yakanaka.
Samsung Galaxy Tarisa 3 - Iyo Galaxy Watch 3 yakasimba yekusimudza piki iyo inopa kuunganidzwa kweLTE, dhizaini yakanaka, uye nekuvandudza hutano / hutano hwekuteedzera.
Skagen falster 3 Iko hakuna sarudzo iri nani kana iwe uchida kupfeka Google's Wear OS pachiuno chako.
Mobvoi TicWatch Pro 3 - Iyo TicWatch Pro 3 inopa kuita kwakanyanya kuita nazvino pamwe nekuvandudzwa kwakakosha kune hupenyu hwebhatiri uye hutano / hutano hwekuteedzera maficha.
Garmin Achira 245 Music - Garmin izita rinoshamisira kuziva, uye Forerunner 245 Music ine yakanakisa GPS kurongeka, hupenyu hwakareba hwebhatiri, uye rutsigiro rwekuzivisa uye nemimhanzi masevhisi.
Ndeapi akanakisa smartwatches?
Kana iwe uri mumusika weakanakisa Android smartwatch, sarudzo dzako dzinofanira kusanganisira edu maviri akanakisa mapikicha, iyo Galaxy Watch Anoshanda 2 uye yakura zvishoma uye isingadhuri Galaxy Watch Active. Misiyano yacho midiki - iyo Inoshanda 2 ine mamwe maseru akati wandei uye inouya mune maviri saizi sarudzo - asi pamwe neiyo nyowani Galaxy Tarisa 3, Ivo vanogadzira anoshamisira ekupfeka eSamsung mutsara kusvika zvino.
Chii chinoita kuti vakure ndiyo fluid Tizen OS yakasanganiswa neyakaisvonaka Hardware. Kusiyana neyekutanga Galaxy Watch, iyo ine bezel inotenderera panyama, iyo Yekutarisa Inoshanda mutsetse inoshandisa iyo "chaiyo" bezel iyo inoita kuti iwe utenderere uchitenderera software nekutenderera uchitenderera kumucheto kwechiono chakajeka cheAMOLED. Samsung Hutano yakavandudzawo zvakanyanya pamusoro pemakore mashoma apfuura uye inoratidzira yakasarudzika sarudzo yekudzidzira yekutevera pamwe neGPS yakavakirwa yekutarisa kumhanya kwekunze kana kuchovha bhasikoro. Hupenyu hwebhatiri pamawachi ese ari maviri anoyerwa mumazuva, kwete maawa uye zvikwata zvemitambo zvinosanganisirwa zvakakwana zvekuti unozokanganwa kuti wakapfeka chero chinhu paruoko rwako zvachose - kudzamara chiziviso chapinda, icho chiri nyore kuita kana kudzinga.
Zvipfeko zveGirazi zvakagadziridzwa zveSamsung mafoni asi zvinogona kupfekwa nechero Android kana chishandiso cheIOS (ehe, zvinoshanda zvikuru nePhones, zvakare), uye Samsung yaita basa rakanakisa rekuchengetedza akura mamodheru akagadziridzwa nezvitsva zvitsva makore mushure mekuburitswa.
Kana iwe usiri kufarira Samsung smartwatch, kana kusarudza mashandiro anoita Google zvinhu, tinokurudzira iyo Skagen falster 3, yekugogodza zvachose kweiyo Wear OS wachi. Yayo yakafumurwa simbi marara ari chaizvo Skagen, asi inosanganisirwa parutivi-yakamisikidzwa yedhijitari korona inoita kuti iwe utenderere uchitenderera software usinga vhari izvo zviri pachiratidziri. Uyezve, inomhanya yazvino Qualcomm chip yakabatanidzwa ne1GB ye RAM yekuita kwemvura.
1. Samsung Galaxy Tarisa Inoshanda 2 $ 249 ku Amazon
Yakanakisa Smartwatch Kwose
Chinonyanya kukosha: Iyo Galaxy Watch Inoshanda 2 ine ese akanakisa ekupfeka eSamsung akakomberedzwa kuita imwe smartwatch. Iyo inoyevedza, yakasununguka, ine hupenyu hukuru hwebhatiri, uye yakawanda yehutano yekutevera maficha ekuita kuti ufare uye kukuchengeta iwe uchikurudzirwa.
Samsung Galaxy Anoshanda 2
Ratidza usayizi 40mm / 44mm
Bhanji rukuru 20mm
uremu 37g (40mm) / 42g (44mm)
Battery upenyu 2-3 mazuva
mavara Sirivheri, Nhema, Goridhe, Pink Goridhe
Mvura inopesana ✔️ (5ATM)
LTE Hongu, Inesarudzo
Otomatiki Workout yekutevera ✔️
Kurara uchiteedzera ✔️
Kutengesa kusina mhepo ✔️ (Qi)
Yakakwana uye yakanyatsogadzirwa
Kwakanaka kuita uye bhatiri
Yechitatu-bato app rutsigiro inogona kuve nani
Hutano hwekuteedzera kwete hwakarurama saGarmin
Haufanire kushandisa nharembozha Samsung kuti unakirwe nezvakanakira kuve neyako Samsung smartwatch, uye iyo Galaxy Watch Anoshanda 2 inopa yakanyanya kutenderera zvakapfeka ruzivo kune vashandisi veApple izvozvi. Iyo compact uye isingaremi asi inoratidzira yakanyanyisa kupinza uye yakajeka kubata kwekuratidzira izvo zviri nyore kufamba uye kunonakidza kushandisa nekuda kweiyo nyowani capacitive bezel. Iyo Tizen OS inotsvedzerera uye ine bhatiri-inoshamwaridzika, kusiyana neGoogle pachayo Wear OS, uye nepo kusarudzwa kweapps kusiri kukuru, misimboti misimboti iripo, seSpotify, Strava, nezvimwe.
Iyo Galaxy Watch Inoshanda 2 ine chinangwa chayo chikuru muzita rayo: kurovedza muviri. Iyo wachi inouya neGPS yakavakirwa-mukati, uye inoratidzira otomatiki kurovedza-kuteedzera, pamwe nekutevera kwekurara, mvura, chikafu uye caffeine yekushandisa kuteedzera, uye zvimwe. Running Coach ficha yakagadziridzwa, izvo izvo zvino zvinokupa chaiyo-nguva yekumhanya metric uye rundown reizvo zvaunotarisira kubva kune yako Workout usati watanga. Iwe unogashira odhiyo cues iyo inogona kunzwika kuburikidza newadhi mutauri kana Bluetooth mahedhifoni.
Kana iwe uchinyanya kupfeka smartwatch yezaziso, iyo Galaxy Watch Inoshanda 2 inonunura ipapo, zvakare, nerutsigiro rwakanaka rweiyo Android's ziviso system, ichikurega uchipindura uchishandisa izwi rako, yakavakirwa-mukati keyboard, kana neimwe yeakawanda mhinduro dzinokurumidza.
Chekupedzisira, hupenyu hwebhatiri, nepo husina kunyatsonaka sevamwe emamwe mawachi makuru pane akanyorwa, ichiri inonakidza, uye wachi inogona kukwidziridzwa nesarudzo Qi isina waya mapads kana neGirazi's Wireless PowerShare ficha.
Samsung Galaxy Tarisa Anoshanda 2
$ 249 ku Amazon
$ 250 pa Best Buy
$ 249 paWalmart
Iyo Inoshanda 2 inopa yakanaka kuratidzwa, pabhodhi GPS, yakawanda chiitiko chekutevera, uye yakasarudzika capacitive bezel yekufamba nyore.
2. Samsung Galaxy Tarisa Inoshanda $ 199 ku Amazon
Yakanyanya Kukosha Smartwatch
Chinonyanya kukosha: Iyo haina kana mwedzi mitanhatu yakura kupfuura iyo Galaxy Watch Inoshanda 2, asi iyo inorasikirwa chete mashoma mashoma maficha uye yakawanda yemutengo tag. Iyo Inotaridzika Inoshanda idiki uye yakareruka asi ine yakanaka AMOLED kuratidza uye bhatiri iyo inotora mazuva mazhinji. Iyo zvakare ine zvese zvinoshamisa zvinhu zvekupfeka zveSamsung zvinozivikanwa.
Samsung Galaxy Anoshanda
768MB RAM, 4GB kuchengetedza
Ratidza usayizi 40mm (360 × 360 resolution)
mavara Sirivheri, Nhema, Rose Goridhe, Girinhi
The Galaxy Watch Active yakatotsiviwa neWatch Active 2, asi iyo yekutanga yakabuda mukutanga kwa2019 uye ichiri sarudzo huru kune chero munhu anoda compact Android smartwatch ine inoshamisa kugona pamutengo wakaderera.
Dhirowa huru pano yakanaka AMOLED kuratidza, iyo inoverengwa mumamiriro ese emwenje kusanganisira kupenya kwezuva. Iyo wachi yakajeka uye yakasununguka kupfeka zuva rese - izvo zvakanaka nekuti bhatiri rinogara izvo uyezve zvimwe. Kunyangwe ichishaya iyo capacitive "inotenderera" bezel yemumwe wayo anodhura, iyo yekutanga Watch Active ine zvese zvaungade kuti ugare, mushe, inoshanda: GPS, NFC, kuchengetedza mimhanzi, uye isina waya Qi kuchaja kuburikidza neiyo Samsung's Wireless PowerShare chimiro.
Zvakanakisisa pane zvese, zvakadzikiswa zvakanyanya kubvira pakazoburitswa sequel, kuti iwe ugone kuiwana yakaderera zvakanyanya kupfuura mutengo wayo wepakutanga.
Samsung Galaxy Tarisa Inoshanda
$ 199 ku Amazon
$ 200 pa Best Buy
$ 199 paWalmart
Diki, yakachipa, uye inenge yakanaka
Kana iwe usiri kuda kushandisa iyo yese mari pane iyo Galaxy Watch Inoshanda 2, iyo yekutanga Watch Inoshanda isarudzo huru.
3. Samsung Galaxy Tarisa 3 $ 369 ku Amazon
Yakanyanya Kusimudzira Sarudza
Chinonyanya kukosha: Kana iwe uchitsvaga yazvino tech, iyo nyowani Samsung Galaxy Watch 3 yakasarudzika sarudza. Iyo yemhando yepamusoro mararamiro anopfeka akazara nezvimwe zvitsva zvehutano uye zvehutano maficha anotendera vashandisi kunakirwa nezvakanakisa zvepasirese.
Samsung Galaxy Tarisa 3
1GB RAM, 8GB kuchengetwa
Ratidza usayizi 41mm / 45mm
360 × 360 chisarudzo
Bhanji rukuru 20mm / 22mm
uremu 43g (41mm) / 49.2g (40mm)
Battery upenyu Mazuva maviri (
mavara Sirivheri, Mystic Nhema, Mystic Sirivheri, Mystic Bronze
Inesarudzo LTE yekubatanidza
Chiitiko / kurara kwekutevera
5 ATM kushorwa kwemvura
Music Kuchengetedza & Samsung Bhadhara
Nzvimbo inodhura yekutangira
Hupenyu hwebhatiri hauna kunaka
Imwe yazvino kuburitswa neSamsung, iyo Galaxy Tarisa 3 inopfuura kungova mararamiro anopfekwa. Wakafanotungamira uyu akange asiriye akanakisa evateveri vekusimbisa muviri sezvo yaive smartwatch yemafashoni ine mamwe mabhonasi akasaswa mukati. Zvino, iyo Galaxy Watch 3 yadzoka uye iri nani kupfuura nakare kose. Icho chakanakisa kukwidziridzwa sarudza kune avo vanoda premium smartwatch ine hutano hwemberi uye kugwinya kwekutevera. Iyo inouya mumatanho maviri uye inopa inosarudzika LTE yekubatanidza, yakavakirwa-mukati GPS, moyo-chiyero chekutarisa, 5 ATM mvura kuramba, uye kugadzikana kwemauto-giredhi.
Maviri ezvitsva zvehutano maficha anosanganisira SpO2 uye VO2 max kuverenga. Kuverenga kweSpO2 kunoyera matanho ako eropa rekuzadza oxygen apo iyo VO2 max inokuudza iwe kuti yakawanda sei oxygen muviri wako yaunodya panguva yekurovedza muviri. Aya mairi maficha nyowani anoperekedzwa neiyo electrocardiogram (ECG) sensor pamwe nekuongororwa kweropa, iro richakurumidza kuwanikwa muU.S. Zvimwe zvinhu zvitsva zvinosanganisira zvakavakirwa-mukati kumhanya kudzidzisa uye maturusi ekushandisa, pamwe nekusvika kweanopfuura zana nemakumi maviri ekudzidzira kumba. mavhidhiyo pane Samsung Health app.
Kana iwe uri mutsva pachiitiko, unogona kusangana nekunamirwa kwesitikiti paunocherekedza mutengo wemutengo pa Samsung Galaxy Watch 3. Chokwadi, ine zvimwe zvinonakidza maficha, asi poindi yemutengo iyi inogona kunge iri kunze kwemubvunzo kune vamwe vanhu. Kana iwe uri mushandisi ane ruzivo smartwatch ane chivimbo mune Samsung inopfeka, iyi yekuvandudza inogona kuve yakakodzera kufunga nezvayo.
$ 369 ku Amazon
$ 370 pa Best Buy
$ 369 paWalmart
Yakakodzera iyo yekuvandudza
Iyo nyowani Samsung Galaxy Watch 3 ndeye inokodzera kukwidziridzwa ine inoshamisa dhizaini, sarudzo LTE, uye yakavandudzwa hutano / hutano maficha.
4. Skagen Falster 3 $ 295 ku Amazon
Yakanakisa Wear OS Smartwatch
Chinonyanya kukosha: Iyo Skagen Falster 3 ndeimwe yeakanakisa-anotaridzika smartwatches pamusika uye ndeimwe yeakanakisa Wear OS anotarisa kunze uko. Kana iwe uchitsvaga chimwe chinhu zvakati wandei, kana uchida kuona Google's vhezheni ye smartwatch OS (iyo ine zvayakanakira nezvayakaipira), iyo Falster 3 inofanira kunge iri padyo nepamusoro peyako runyorwa.
1GB RAM, 4-8GB kuchengetedza
Ratidza usayizi 42mm / 1.3 ″, 328 × 328 AMOLED
Bhanji rukuru 22mm
Battery upenyu 1-2 mazuva
OS Kupfeka OS
mavara Dema, Sirivha
Otomatiki Workout yekutevera ?
Kurara uchiteedzera ?
Kutengesa kusina mhepo ?
Inoyevedza, dhizaini dhizaini
Dhijitari korona inonakidza
Mutauri anoita kuti iwe utore mafoni
Kwakanaka mhando kuratidza
Yakavakirwa-muGoogle Kubhadhara rutsigiro
Inoshandisa mabhizimusi makumi maviri nemasere
Dzimwe nguva iwe unongoda smartwatch iyo inoratidzika kunge wachi. Unoda dhizaini yakapusa, tambo yemhando yepamusoro, uye magumo asingadanidzi, "ichi chidimbu chehunyanzvi!" Huye, iyo Falster 3 kubva kune inozivikanwa Danish wachi yemhando Skagen ndizvo chaizvo izvo.
Mumwe Skagen Falster 3 mabhenefiti makuru kurongeka kwayo kwematatu-mabhatani, ayo anosanganisira korona inotenderera iyo inobatsira kupururudza kuburikidza neWear OS usingabate chinovhara - chakakura kubatsirwa kana iwe watanga kuishandisa. Iwe zvakare unowana yakanaka isina simbi muviri, tambo dzakagadzirwa zvakanaka mune chero dehwe, simbi, kana silicone mune akasiyana mavara, uye zvese zvakakosha zvinhu zvaunotarisira, sekushomeka kwemvura, GPS, yemoyo yekutarisa, NFC, uye zvakawanda.
Iyo Falster 3 ndeye 2020 yekuvandudza kuSkagen's smartwatch mutsara, uye inovandudzwa munzira dzese - iwe unowana yakawanda RAM yekutsetseka kuita, mutauri wekugadzira nekutora mafoni, uye yakawanda-yakavandudzwa hupenyu hwebhatiri nekuda kweSkagen nyowani Yakawedzerwa Bhatiri modes.
$ 295 ku Amazon
Masikati neusiku zvakagadzirira
Iyo Skagen 3 musanganiswa wakaringana wemaitiro uye kugona mune smartwatch. Iyo ndeimwe yatinofarira akasiyana-siyana Wear OS watches.
5. Mobvoi TicWatch Pro 3 $ 300 ku Amazon
Zvakanakisa kune Premium Performance
Chinonyanya kukosha: Sezvo isu tave kutarisira kubva kuMobvoi, iyo nyowani TicWatch Pro 3 yakakura uye iri kutarisira. Ichi chishandiso chinopa kutsetseka mashandiro, hupenyu hwakareba hwebhatiri, uye zvimwe zvitsva zvehutano maficha. Siginecha yekambani mbiri-mu-imwe inoratidzira inoita kuti iwe uione muzuva rakananga.
Specs Qualcomm Snapdragon 4100, 1GB RAM, 8GB kuchengetedza
Ratidza usayizi 47mm /1.4 ″
454 × 454 Retina AMOLED + FSTN
mavara Shadow Black
Mvura inopesana (IP68)
Upenyu huri nani hwebheteri
Imwe chete sarudzo yemavara
Bulky pane zvidiki maoko
Kana iwe uchida zvinhu zvikuru mumapakeji mahombe, iwe unozokoshesa izvo izvo TicWatch Pro 3 iri kuunza patafura. Iyi smartwatch inouya neyemaviri-masara ekuratidzira, ayo aunogona kuyeuka kubva kune apfuura mamodheru. Ino nguva, iyo Dual Ratidza 2.0 yagamuchira imwe inobatsira masitayera ekuvandudza, kusanganisira mhenyu yemasekondi kadhi uye yakajeka backlight. Bhatiri rinotarisirwa kugara kwemazuva matatu mu Smart Mode zvichienderana nekushandisa kwako. Iwe zvakare uchanakidzwa yakavakirwa-mukati GPS, chiitiko chekutevera, moyo-rate kuongorora, nyowani yeropa oksijeni (SpO3) sensor, uye Google Pay.
Nepo pasina kuramba kwekuti 47mm smartwatch yakanaka kwazvo, Mobvoi anoona kuti yakagadzirisazve TicWatch Pro kuti ive yakatenderedza 30%. Sezvaunogona kufungidzira, izvi zvinoita kuti zvinyanye kusununguka kupfeka kunyangwe yakakura saizi kesi. Nepo iko kuvandudzwa kwekuita iri nyeredzi yechiratidziro (heino kwauri, Snapdragon Wear 4100), kune zvimwe zvigadziriso zvinofanirwa kutariswa. Iyo TicWatch Pros 3 yakazorodza maapp ayo aripo, kusanganisira TicExercise uye TicPulse. Iye zvino, iwe zvakare uchave uine TicOxygen yeSpO2 yekutevera, TicHearing yekuona ruzha uye kunyevera, TicZen yekutarisa maseru ekumanikidza uchishandisa moyo-rate data, uye TicBreathe yekudzidzira mweya.
Kana iwe usina hanya nekukura kwakaita uku kupfeka, iyo TicWatch Pro 3 inyanzvi yekuvandudza nematani ekuvandudza. Vamwe vanhu vanogona kunzwa kuti iyo 47mm kesi saizi iri kukunda. Nekudaro, kana iwe uchida snappy performance nekuda kweiyo nyowani Snapdragon Wear 4100 processor, zvinogona kunge zvichikosha. Kubva ikozvino, iyo TicWatch Pro 3 ichiri kushanda pane yekare vhezheni yeWear OS. Ndinovimba, mashandiro acho acharamba achienderera mberi nekuvandudza kana iyo sisitimu yekushandisa iri yakarongedzwa gare gare gore rino.
$ 300 ku Amazon
$ 300 paWalmart
Kurumidza kupfuura nakare kose
Unoda ultra-smooth performance, GPS, moyo-chiyero chekutarisa, chiitiko / hutano hwekuteedzera, uye zvimwe? Iwe unenge wasangana nemutambo wako neTicWatch Pro3.
6. Garmin Forerunner 245 Music $ 329 ku Amazon
Yakanakisa Smartwatch Yeiyo-Kure-Kure Vanomhanya
Chinonyanya kukosha: Kana kumhanya izita remutambo wako, iyo Garmin Forerunner 245 Music iri nyore sarudzo yakanakisa. Iyo ine yekuratidzira inoratidza iyo iri nyore kuverenga muzuva rakananga. Iyo inouya neyakagadzikana bhendi, stellar bhatiri hupenyu, uye isingaenzaniswe
Garmin Achira 245 Music
Ratidza usayizi 42mm / 1.2 ″, 240 × 240 inoshandura
Battery upenyu 7 mazuva
mavara Dema, Muchena, Aqua
Yepamberi yekudzidzira yekutevera pamwe nekutungamira
Inoshamisa hupenyu hwebhatiri
Chiedza chezuva-chinoshamisira chinoratidza
Tambo yakasununguka kwazvo
Yakatemerwa smartwatch maficha
Basic dhizaini inogona kunge isiri yemunhu wese
Iko smartwatch yemhando dzese dzevashandisi veApple, uye iyo Garmin Achira 245 Music isarudzo yakatanhamara kune chero munhu anomhanya, mabhasikoro, kana kushambira. Haisi smartwatch yakanakisa, asi inogamuchira zviziviso kubva kufoni yako. Kana iwe usingade zvakawanda kupfuura izvozvo - uye ndiani anoita mazuva ano? - Forerunner 245 inogadzirira iyo neinoshamisa 7+ zuva bhatiri hupenyu, kana maawa matanhatu neGPS inogoneswa, inova inopfuura yakaringana yemarathon (kana maviri kana iwe uchinyatsonaka).
Zvirinani izvo, iyo yekushandura skrini inoreva kuti Forerunner 245 iri nyore kuoneka muzuva rakananga, ichiita kuti ive yakakwana kune yakatambanudzwa mafambiro ekunze. Kune zvakare mimhanzi yekuchengetedza uye sarudzo yekuyerera kubva kuSpotify kana Deezer, izvo zvakakomba zvakanyanya kana iwe uri kuyedza kurova avo vega bests. Wedzera mu24 / 7 moyo wekutarisa, kurara kwekutevera, yepamusoro yekurovedza kubatwa, uye epamberi maficha senge VO2 max kufungidzira, chipangamazano wekudzosa, uye zvimwe, uye ichi chinova chinoshamisa sarudzo.
Zvakanakisa kune marefu-Kure Mhanya
$ 329 ku Amazon
$ 350 pa Best Buy
$ 350 paWalmart
Yakasimba, yakatetepa GPS tracker.
Garmin's GPS tech iri paired neyakavimbika moyo-rate tracker mune yakatetepa wachi inoenderana kune yayo yega app uye mamwe anozivikanwa maapplication.
7. Fitbit Versa 3 $ 230 ku Amazon
Yakanakisa Smartwatch Yevasina Kufanira Vatambi
Chinonyanya kukosha: Seimwe remazita anozivikanwa kwazvo munyika inopfeka, Fitbit inogara iri sarudzo yakanaka. Iyo nyowani Versa 3 yakanangana nehutano nehutano hwekuteedzera, saka yakanaka kune vanofarira kurovedza muviri. Iwe wakavakira-mukati GPS, chiitiko / kurara kwekutevera, moyo-chiyero chekutarisa, uye Fitbit Pay.
Ratidza usayizi 40mm / 1.58 ″, 336 × 336 AMOLED
Bhanji rukuru Tsika, OSFA
Battery upenyu 6 + mazuva
mavara Dema, Nyoro Goridhe
Yakapfava, inoyevedza dhizaini
Yakanaka chaizvo yeupenyu hwebheteri
Solid smartwatch maficha
Yakavakwa-mukati Alexa uye Google Mubatsiri
Kusarudzwa kwemapurogiramu mashoma
Mabhendi ekare haashande pamwe neVersa 3
Wese munhu anoziva kuti Fitbit inogadzira zvimwe zvekupfeka zvakanakisa muindasitiri. Parizvino, iyo nyowani-nyowani Versa 3 ndeimwe yeakanakisa maFitbit smartwatches aunogona kutenga. Nehungwaru inopa huwandu hwakakwana hwezvinhu zvewatchwatch uye zvekusimba-kwekutevera zvigadzirwa mune chimwe chinhu chinobatsira kwazvo. Yakatetepa uye isingaremi ine dhizaini inokwezva. Iwe unozowana angangoita mazuva matanhatu ehupenyu hwebhatiri, zvinoyevedza. Izvi zvinonyanya kuitika kana iwe uchinge waona kuti ine inoshamisa AMOLED kuratidzira iyo yakapfava uye yakajeka. Imwe yeakanyanya kukwidziridzwa kuwedzera kweboardboard GPS.
Iwe uchave unofara kuziva kuti ese eFitbit maficha iwe aunoziva iwe pachako pamusoro pemakore aripano zvakare. Iwe une24 / 7 moyo-chiyero chekutarisa, yese-yezuva chiitiko / yekurara yekutevera, uye otomatiki kurovera kwekuziva. Iwe zvakare unogashira zviyeuchidzo zvekufamba mukati mezuva rako rese. Inopawo pa-screen Workout iwe yaunogona kutevera pamwe chete nayo. Pakutanga, mabhendi enzvimbo ainetsa kuchinja. Iwo matsva infinity mabhendi anopa ari nyore-kushandisa-nekukurumidza-kuburitsa system. Nhau dzakaipa ndedzekuti chero ekare maVersa mabhendi awakatenga haashande paiyi wachi itsva.
Hazvina kujairika kune zvimwe zvigadzirwa zveFitbit kushaya smartwatch maficha ayo vashandisi vanoshuvira. Nekudaro, iyo Versa 3 ndeimwe yekambani inokwanisa kwazvo kugwinya smartwatches parizvino. Iwe unenge uine zviziviso zve smartphone zviri nyore kufamba, uye chitoro cheapp chine mazita anozivikanwa seSpotify neStarbucks, uye unogona kutaura wakanangana nemubatsiri wezwi uye unzwe mhinduro. Kana nzeve dzako dzikanangana nezveSpotify, nhau dzakanaka ndedzekuti pane chekuchengetera nziyo mazana matatu + paVersa 300. Ngatirege kukanganwa kuti Fitbit Pay iri chimiro cheyakajairika futi.
Inogona kunge isiri kufashukira neakakwira-magumo maficha, asi iyo Fitbit Versa 3 iri nyore iri smartwatch yakanakisa yevasingaite trackers vasingade kushandisa mari yakawanda kupfeka.
$ 230 ku Amazon
$ 230 pa Best Buy
$ 230 paWalmart
Yekusimbisa smartwatch iyo yakanaka pane zvese
Iyo Versa 3 inovandudza pane zvese pamusoro peiyo yekutanga, kusanganisira dhizaini inonakidza, hupenyu huri nani hwebhatiri, uye yakavakirwa-mukati GPS.
8.Fitbit Sense $ 330 ku Amazon
Yakanakisa Hutano Hutano Smartwatch
Chinonyanya kukosha: Paunenge iwe uchida kutora yako yehutano yekutevera kune inotevera nhanho, usatarise kupfuura iyo Fitbit Sense. Iwe unenge uine zvese zvekambani zvakajairwa zviitiko zvekutevera zvinowedzera pamwe neakakosha ma newbies, anosanganisira electrocardiogram (ECG), electrodermal chiitiko (EDA), uye ganda tembiricha sensor.
mavara Graphite, Nyoro Goridhe
Yepamberi hutano hutano hwekuteedzera
Otomatiki Workout yekutevera
6+ mazuva ehupenyu hwebhatiri
Haasi munhu wese anoda advanced sensors hutano
Kana iwe wanga uchitanga kufunga kuti Fitbit inowira mune "zvakajairika" smartwatch chikamu, fungidzira zvakare. Imwe yekuburitswa kutsva kwekambani, iyo Fitbit pfungwa, iri pano kuratidza dzidziso iyoyo. Iyi yepamusoro smartwatch yehutano ndeimwe yemidziyo yakangwara pamusika izvozvi. Kana iwe uchinetseka kuti nei zvakadhura zvakanyanya kupfuura zvimwe zvinopfeka kubva kukambani, unogona kutenda mashoma ema sensors nyowani.
Iyo electrocardiogram (ECG) sensor iri kuwedzera uye ichijairika pane smartwatches mazuva ano. Ichi chiitiko chinokutendera kuti utarise rwiyo rwemoyo wako, runogona kubatsira pakuona hutachiona hwemagetsi (hunowanzo kunzi AFib). Iwe unenge uinewo iyo EDA sensor, inoongorora muviri wako electrodermal chiitiko. Izvi zvinobatsira pakunzwisisa kuti muviri wako unoita sei nekushushikana. Iyo yekushisa tembiricha sensor iripowo, iyo inopa miniti-ne-miniti kuverenga iyo inokuudza iwe kuti yako tembiricha yemuviri inoshanduka iwe uchinge wakarara.
Iko Fitbit Sense yakakosha mutengo wakakwirira mutengo? Izvo zvinonyanya kutsamira parudzi rwemushandisi unopfeka wauri. Kana iwe uri mushandisi ane ruzivo uye urikutsvaga yepamusoro-notch chishandiso chinogona kukubatsira iwe kuti utarise zvirinani pane hutano hwako, ipapo zvinogona kuve zvakakosha mari yekuwedzera.
$ 330 ku Amazon
$ 330 pa Best Buy
$ 330 paB & H
Kutarisa kwakadzama pahutano hwako
Iyo Fitbit Sense inogona kutaridzika yakafanana neiyo Versa 3, asi ine zvimwe zvakawanda pasi pehood. Iyo sensors nyowani inochinja nzira yaunoteedzera.
9. Fossil Mbeu dzakauchikwa HR $ 177 ku Amazon
Yakanakisa Hybrid Smartwatch
Chinonyanya kukosha: Iyo Fossil Hybrid HR inokupa iwe chiyero chakaringana chestyle uye maficha. Iwe unowana kuravira kweimwe smartwatch perks uye kutaridzika kwechinyakare wachi wachi. Inoteedzera zvaunoita uye kurara, kuongorora yako yekurova kwemoyo, uye kukupa iwe anopfuura mavhiki maviri ehupenyu hwebhatiri.
Zvakasarudzika Mbeu dzakauchikwa HR
Ratidza usayizi 42mm / 1.06, E-Ink
Battery upenyu 2 + mavhiki
OS Mbeu dzakauchikwa OS
mavara Rima Bhuruu, Tani, Dema, Simbi Isina
Mvura inopesana ✔️ (3ATM)
2+ mavhiki ebhatiri
Inoshaya sarudzo dzeGPS
Kwete yakanakisa yekutevera kwakakomba
Mahybrid smartwatches akasarudzika munzira dzakawanda. Kunyanya kukosha, iwe kazhinji haugone kutaura kuti iri smartwatch zvachose. Iyo Zvakasarudzika Mbeu dzakauchikwa HR inouya nezvakaringana maficha ekudaidza iyo 'smart' zita asi haina kufanana kune mamwe emamwe mapiki pane ino runyorwa. Semuenzaniso, hauzove neyekubata bata, saka ako ese ekufamba-famba anozoitwa nematatu emativi mabhatani. Iyo zvakare haina inoratidzira inoratidzira, asi zvirinani iwe unowana yakasimba mavhiki maviri ehupenyu hwebhatiri mukudzoka.
Iwe unokwanisa kugadzirisa kuratidzwa kune zvaunofarira, izvo zvinosanganisira pa-a-kutarisisa info yesarudzo yako, senge mamiriro ekunze, nhanho, uye notisi. Zvimwe kunze kwekutanga kwekuita / kurara kuteedzera uye moyo-chiyero chekutarisa, usatarisira rakatenderedzwa smartwatch chiitiko kubva kuFossil Hybrid HR. Ingori yemasanganiswa, mushure mezvose. Iwe ucharasikirwa neGPS, NFC kubhadhara, mimhanzi yekuchengetera, uye zvimwe zvemhando yepamusoro maficha.
Yakanakisa Mbeu dzakauchikwa
Kubva ku $ 177 kuAmazon
Kubva pamadhora mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe nemashanu paBeche Buy
$ 177 paWalmart
Unoda kunakidzwa neakakura smartwatch maficha pasina kupira hupenyu hwebhatiri kana maitiro? Iyo Fossil Hybrid HR isarudzo yakanaka.
10. Suunto 7 $ 459 ku Amazon
Yakanakisa Wear OS yeVakanyanya Vatambi
Chinonyanya kukosha: Vashandisi veWear OS vanoda smartwatch yemafashoni yakagadzirirwa vatambi vakakomba vachada iyo Suunto 7. Ndiyo zvakare sarudzo yakanakisa kana iwe uchida chimedu chihombe chehunyanzvi pachiuno chako. Iyo inopa yakavakirwa-mukati GPS ine isingaite kunze mepu mamepu, epamusoro zviitiko zvekutevera, Google Pay, uye nemhando dzakasiyana-siyana dzemavara sarudzo.
Specs Qualcomm Snapdragon 3100, 1GB RAM, 8GB kuchengetedza
Ratidza usayizi 50mm / 1.39 ″, 454 × 454 AMOLED
Bhanji rukuru 24mm
Battery upenyu 2 zuva
mavara Dema Lime, Yese Nhema, Girafu yemhangura, Sandstone Rosegold, White Burgundy
Yakavakwa-mukati meGPS uye isingaenderane mamepu ekunze
Mhando dzakasiyana dzemavara
Kwakanaka zviitiko zvekutevera
Mvura isingadziviriri kusvika ku5ATM
Zvishoma wo yakakura kune vamwe
Hupenyu hwebhatiri ndewepakati
Kana iwe uchisarura kuWear OS uye uchitsvaga yakaringana Android smartwatch yekubata yako chiitiko chekutevera, haugone kukanganisa ne Zuva 7. Izvi zvinopfeka zvakanyatso nyowani kumusika asi zvine mukana wekuve mukuru - kunyanya kana iwe uri mutambi akasimba anotarisana nekutevera kwakadzama. Pamusoro peyakavakirwa-mukati GPS uye izere-ruvara rwakatsetseka mepu software, zvakare inodada pamusoro makumi manomwe emitambo modes. Kutenda kumaappu aSuunto, iwe unokwanisa kuwana metric dzinobatsira dzinoenda pamusoro uye kupfuura izvo zvinowanika paGoogle Fit, kusanganisira kudzidzisa mutoro, kudzidzisa kupora, uye zvimwe.
Kana iwe uchibatanidza zvese izvo Suunto 7 zvinofanirwa kupa neWear OS, unofanirwa kunge uri mutambo wakaitwa kudenga, handiti? Izvo zvinoenderana nerudzii rwechiitiko chaunoda. Kana iwe uchikwanisa kurarama nemazuva maviri chete ehupenyu hwebhatiri mune smartwatch modhi uye mukana wekusagadzikana kwekuita nekuda kwekushanda-kuri-kufambira mberi kwechimiro cheWear OS, saka ndicho chisarudzo chakasimba chevatambi vakakomba vanoda zvese zvekutevera zvavanokwanisa. tora.
Sezvaungave wakacherekedza, ichi chinhu chakakura. Iyi ibhonasi yevamwe vashandisi, asi mawristy akasimba anogona kunyara kubva paiyi 50 mm juggernaut. Kana iwe uri pabhajeti, iyi inodhura smartwatch inogona kunge isiri sarudzo yakanyanya kunaka.
Kubva ku $ 459 kuAmazon
$ 499 pa Best Buy
$ 499 paWalmart
Smartwatch yemitambo chaiyo
Ivo vanoda zvakadzama kuteedzera mune yechinhu chinoyevedza asi chemitambo smartwatch vachada zvese nezve iyo Suunto 7.
11. Zvakanyorwa naGenesi 5 Julianna $ 295 ku Amazon
Zvakanakisa zveFashoni yeVakadzi
Chinonyanya kukosha: Kana iwe uchitsvaga smartwatch ine chikadzi yekubata, usatarise kupfuura iyo Fossil Gen 5 Julianna. Zvese zviri zvemufashoni uye zvinoshanda. Zvimwe zveakakosha maficha anosanganisira GPS, Google Kubhadhara, hutano / chiitiko chekutevera, uye moyo-chiyero chekutarisa. Inowanikwa mune akawanda anoshamisa apedza futi.
Zvinyorwa Gen 5 Julianna
Ratidza usayizi 44mm / 1.28 ″, 328 × 328 AMOLED
Battery upenyu 1 zuva
mavara Utsi, Goridhe, Rose Goridhe, Blush, Sirivheri
Fashionable uye zvinoshanda
Kwakanaka kuita nekuda kwe1GB ye RAM pabhodhi
Inokwanisa kutora nhare ine yakavakirwa-mukati mutauri
Tinotsigira chero 22mm wachi bhendi
Hupenyu hwakasarudzika hwebhatiri yeiyo Wear OS wachi
Fossil yakagara iri yezve mafashoni wachi, izvo zvinogadzira Julianna, yazvino smartwatch yakanangana nevakadzi, imwe yemafashoni zvakanyanya nazvino. Neraki, iyo Julianna inomira kupfuura zvinopfuura kutaridzika. Yakavakirwa papuratifomu imwe chete yemazuva ano seFossil Sport asi iine mamwe maficha. Pamusoro pekusava nemvura uye kutsigira 24/7 moyo-chiyero chekutarisa, kune zvakare GPS yekutevera inomhanya uye yakashongedzwa yedhijitari korona yekureruka nyore.
Ikozve kune maficha ausingaone chero kumwe kune iyo Wear OS ecosystem: yakavakirwa-mukati mutauri wekutora nhare kana yakabatana neiyo Android chishandiso kana iPhone, pamwe neyakavandudzwa bhatiri iyo inopa kusvika matatu mazuva ekuenzanisa mashandisirwo. Chekupedzisira, iyo 1GB ye RAM inoona iko kukurumidza kuita muiyo Wear OS ecosystem. (Fossil zvakare ine Gen 5 smartwatch yakanangana nevarume vanonzi Carlyle.)
Haisi yakachipa, asi iyo Julianna ndeimwe yeakanakisa Android smartwatch sarudzo kunze uko.
$ 295 pa Best Buy
$ 384 paWalmart
Inoita zvese here
Fossil's ichangoburwa smartwatch yevakadzi inozviita zvese, kubva pakuteedzera hutano kusvika pakutora mafoni ekushandisa maapplication - uye zvinotaridzika kuita zvakanaka.
12. Michael Kors Access Bradshaw 2 $ 263 ku Amazon
Zvakanakisa Kune Fashoni Yevarume
Chinonyanya kukosha: Varume vanogona kukora chinoshamisika chakapfekedzwa vasina kupa zvibayiro zvakakosha zvewatchwatch, kunova iko kunouya Michael Kors Access Bradshaw 2. Iyo inopedza, asi iwe haugone kurova izvi zvigadzirwa zvepamusoro. Iwe zvakare unowana yakavakirwa-mukati GPS, Google Kubhadhara, uye yakakosha zviitiko zvekutevera neGoogle Fit.
mavara Ndarama, Rose Goridhe, Sirivheri, Tri-Tone
Sleek, dhizaini dhizaini
Inzwi-rakagadziriswa Google Mubatsiri
3 ATM kushorwa kwemvura
Zuva rimwe chete rebhateri
Michael Kors anoenderera kuva mumwe wevatungamiriri kana zvasvika pamafashoni smartwatches. Iyo itsva Access Bradshaw 2 haina kusara. Iyo inouya mune ine rupo 44mm kesi uye inowanikwa mune sirivheri, goridhe, pfuti, uye yakasimuka dzakasiyana ndarama. Zvingave zvakaoma kutenda kuti wachi iyi yakanaka inoita zvinopfuura kutaridzika, asi inodaro. Iyi Wear OS smartwatch irikumhanya iyo nyowani Snapdragon Wear 3100. Paunosanganisa iyo ne8GB yekuchengetedza uye 1GB ye RAM, unogona kutarisira kushanda kwakanyanyisa.
Kune zvakawanda maficha ekuda pano, kusanganisira mimhanzi chengetedzo uye zvinodzora, Google Fit, izwi-rakagadziriswa Google Mubatsiri, Google Pay, onboard GPS, moyo-rate yekutevera, uye zvimwe. Iyo ine zvese maikorofoni uye mutauri, ichigonesa iwe kutora nhare kubva pachiuno chako. Ipo bhatiri richagara kwezuva zvakanyanya, rinouya nekuchaja nekukurumidza uko kunosvika 80% bhatiri mukati megore.
Tichifunga zvese izvi zvidzoreso, iyo Michael Kors Access Bradshaw 2 zvirokwazvo haina kudhura. Mutengo wemutengo unonzwisisika kupihwa iko kwepamusoro kuita, maficha nyowani, uye dhizaini dhizaini.
Kubva ku $ 263 kuAmazon
$ 263 pa Best Buy
Akanaka uye akangwara
Varume vanogona kuve vane mufashoni, zvakare. Iyo Access Bradshaw 2 inotaridzika uye yakapusa, kubva pakutora nhare kuenda kune yekusimba yekutevera kune kubhadhara.
Maitiro ekutora yakanakisa Android smartwatch
Nhau dzakanaka dzekupfeka smartwatch mu2020 ndeyekuti nepo paine zvakawanda zvekusarudza pane Wear OS divi rezvinhu. Iwe zvakare une zvakasarudzika sarudzo kubva kumakambani senge Samsung, Fitbit, uye Garmin, futi.
The Samsung Galaxy Tarisa Anoshanda 2 chisarudzo chakatanhamara chevanhu vazhinji uye chakatambira kurudziro yedu Yakanakisa Kwazvo Kwazvo. Unogona kunyange kunakidzwa nazvo kana iwe usiri yako Samsung chishandiso. Iwe unenge uine yakavakirwa-mukati GPS, chiitiko, kurara, uye moyo-chiyero chekutevera, mumhanzi chengetedzo, ziviso ye smartphone, Samsung Kubhadhara, uye zvimwe. Izvo hazvisi kuwana zvirinani kupfuura izvi.
Ehezve, munhu wese ane zvavanofarira. Kana usiri fan weTizen OS kana Samsung Hutano, sarudzo dzako hadzigone kumira ipapo. Iwe uchave nesarudzo yako yezvimwe zvakawanda zvinopfeka, kungave kuri kubva kwaFitbit, Garmin, Fossil, kana chero chero chimwe chiratidzo chakabata pfungwa dzako.
Pane zvakawanda zvezvinhu zvekutarisa kana iwe uri kushanyira smartwatch. Kunyangwe ichi chiri chako chekutanga kupfeka kana iwe wanga uchinge wakakomberedza block yacho nguva kana maviri, iwe uchazoda kudzikisira pasi zvimwe zvakakosha usati waita sarudzo. Hezvino zvinhu zvikuru zvaunofanira kutarisa pane:
1. Saizi uye dhizaini dhizaini
Kutanga uye pamwe zvakanyanya kukosha, iwe uchafanirwa kuona saizi yewatch yauri kutevera. Mawadhi madiki anowanzo kuve akadhura pane mamwe awo akakura, uye mamwe mawatch anogona kunge akakurisa kana kuti madiki pachiwoko chako, izvo zvinokurumidza kutetepesa boka. Iyo isina-yakachipa-yakachipa Suunto 7 muenzaniso wakanaka.
Uye zvechokwadi, hatigone kukanganwa nezve aesthetics. Iwe uchiri kutenga yewachi, shure kwezvose, uye inofanirwa kuenderana nesitayera yako! Iwe unogona nguva dzose kusarudza imwe yemafashoni emawadhi pane ino runyorwa, seFossil Gen 5 Julianna kana iyo Michael Kors Access Bradshaw 2.
Kana iwe uchinyanya kunetseka nezve kuva neyakagadzikana fit pane dhizaini dhizaini, kune dzimwe sarudzo dzingangotorera ziso rako. Vanomhanya vachada kutaridzika kutarisa uye kunzwa kweGarmin Forerunner 245 Music, semuenzaniso. Kana iwe uchinakidzwa nepfungwa yechinhu chidiki dhizaini asi iwe uchida chimwe chinhu kutonyanya kufadza, iyo Skagen Falster 3 inonyengera uye yakashongedzwa zvakakwana zvekupfeka kwezuva nezuva.
2. Funga zvaunofanira-uine maficha
Iwe zvakare unofanirwa kuyera kukosha kwezvinhu zvakaita seGPS, kugwinya uye kurara kwekutevera, kubatanidza maseru, moyo-chiyero chekutarisa, uye nhare mbozha. Neraki, hazvina kuoma kuwana wachi ine zvishoma zvese mazuva ano. Nezvo zvataurwa, runyorwa rwako rweasarudzo ruchapfupika kana iwe wakagadzirirwa kuve newachi ine nhare yekubatanidza. Iwe unongowana chete maviri mamodheru pane ino runyorwa neicho chinhu, saka kunhonga kwacho kuri kutetepa. Haasi munhu wese arikutenga smartwatch yekubatana kweLTE, saka izvi hazvizove chibvumirano-chekupwanya kune vazhinji vashandisi.
Zvimwe zvezvinhu zvakajairika iwe zvaunowana pane mazhinji smartwatches mazuva ano anosanganisira GPS, kuteedzera hutano, uye kuongorora kwepamoyo. Pachine mamwe mamodheru ayo achiri asati asvetuka pane yakavakirwa-mukati GPS ngoro, saka uchafanirwa kusarudza kuti izvi zvinorevei kwauri. Ichokwadi, iwe unogona achiri kushandisa GPS yakabatana kuburikidza neako smartphone asi haina kuita senge iri nyore. Iyi inyaya yakajairika pane fitness trackers. Neraki, mazhinji ema smartwatch eApple pane ino runyorwa ane akakwira GPS.
Chimwe chiitiko chatiri kuona ichiwedzera uye yakawanda yeNFC yekubhadhara nhare. Muchokwadi, inopfuura hafu yezvipfeko pane ino rondedzero unayo. Iwe hausi kuzochiwana pane mamwe maratidziro eniche, seGarmin Forerunner 245 Music kana iyo Fossil Hybrid HR, asi izvi zvinonyanya nekuti iwo mamodheru akagadzirirwa kune imwe mhando yemushandisi.
3. Ndeipi OS yaunosarudza?
Kusarudza sisitimu yekushandisa kunogona kunetsa nekuda kwezvikonzero zvakati. Kana iwe uri mutsva kune iyo smartwatch nyika, unogona kunge usina hanya nezvenyaya iyi asi inogona kukanganisa chiitiko chako chose, saka zvakakodzera kuti utore pamusoro. Chimwe chezvinyanya kunetsa ndechekuti yako smartphone inoshanda sei neako smartwatch.
Izvo zviri nyore uye zvakanyanya kuyerera kuve neiyo Android smartwatch paired neiyo Android smartphone? Ndizvozvo. Icho chinofanira kuve icho chinosarudza? Kwete chaizvo. Unogona kushandisa iPhone ine Android smartwatch asi gadzirira dzimwe hiccups munzira. Iko kunogona zvakare kumwe kugumira, sekusakwanisa kushandisa inokurumidza kupindura chinhu kupindura kune meseji kubva kuwachi yako.
Chichemo chinodzokororwa kubva kune vashandisi veSamsung ndechekuti Tizen OS haigare ichiita basa rakakura rekuratidzira zviziviso pamawachi ayo. Hakusi kuti ivo vanokundikana kuoneka asi kuti iwo sarudzo dze sei zvinoratidzika kunge zvishoma. Iwe unogona kunge uine nguva iri nyore yekupfuura kuburikidza nezviziviso pane Wear OS smartwatch.
Mamwe makambani e smartwatch akadai saGarmin naFitbit anoshandisa avo vega masisitimu anoshanda. Izvi zvinogona kusanganisira imwe yenguva yekudzidza mune dzimwe nguva, asi zvingangove zviripo. Kana iwe uri mumhanyi anodakadza uyo anowanzo tarisa ako ekurovedza uye mamwe matanho, Garmin isarudzo yakanaka kwazvo. Vatambi vasina kujairika, kune rumwe rutivi, vanogona kuwana hunhu hwakareruka hweFitbitOS kuve mushandisi-inoshamwaridzika uye nyore kufamba nayo.
4. smartwatch yemasanganiswa yakangwara zvakadii?
Kana iwe uri kudzidza nezve hybrid smartwatches kekutanga, iwe unogona kunge uchishamisika chete kungwara zvakadii vari. Iwe unowana musanganiswa wakanaka wenguva yechinyakare ine mawadhi ewatchwatch akasaswa mukati. Zvisinei, usatenge imwe yeiyi inopfeka inotarisira maficha eprimiyamu.
Iyo Fossil Hybrid HR, semuenzaniso, inopa moyo-chiyero chekutarisa, yekutanga chiitiko chekutevera, mimhanzi zvinodzora, uye notisi dze smartphone. Iwe hauzove neakajeka AMOLED kuratidza, Google Mubatsiri, nharembozha, kana chero sarudzo dzeGPS. Vaya vanoda kuravira kwenyika yewatchwatch vasina kuenda-mukati vanogona kuwana ino kunge nzvimbo yakanaka yekutanga.
5. Ko hupenyu hwebhatiri?
Vamwe vashandisi havagone kumira nepfungwa yekutora wachi yavo kubva kumaawa makumi maviri nemana kuti vaibhadhare. Neraki, pane huwandu hwakafanira hwemazuva mazhinji ehupenyu hwebhatiri pane ino runyorwa. Iwe unogona zvakare kuenda kune modhi neepamberi tekinoroji iyo inobatsira kuwedzera hupenyu hwebhatiri, senge mbiri-dura kuratidza paTicWatch Pro 24.
Mamwe mamodheru anopa modhi-yekuponesa mabhatani ayo anodzima zvimwe zvinhu kuti awedzere hupenyu hwebhatiri, asi izvi hazvigare zvakanaka. Neimwe nzira, kana iwe ukasarudza wachi yakadai seSkagen Falster 3 iyo inopa kukurumidza kuchaja, inogona kunge isinga nyanye kunetsa. Ingo seta wachi yako kubhadharisa mangwanani paunenge uchigadzirira zuva racho uye rinozosvinwa usati wariziva.
Kana iwe uchiri kutsunga kutsvaga wachi ine yepamusoro bhatiri hupenyu, Garmin naFitbit vanopa dzimwe dzakanakisa sarudzo idzo dzinopa rinenge vhiki rinokoshesa hupenyu hwebhatiri. Kunyange pasina chinhu chinogona kurova iwo mavhiki maviri + anopiwa neFossil Hybrid HR, iva wakagadzirira kukanganisa kana zvasvika pazvinhu zvakakosha zvewatchwatch.
Paunenge uchinge wanyora zvese izvi, iwe unofanirwa kuve neruzivo rwakanaka rwekuti ndeupi rudzi rwewatchwatch yaunofanira kutenga. Hazvina mhosva kuti ndeipi sarudzo yaunosarudza, unogona kutarisira kuve neyakanaka tech iyo ichakubatsira iwe kutarisa hutano hwako uye kugwinya uku uchikupawo chinonakidza chinoshamisira kuti ubatanidze neako wega maitiro.
Aya ndiwo akanakisa ewadhi smartwatches aunogona kutenga
Yakanakisisa yeFitbit fitness tracker 2020: Ndeipi Fitbit yakakodzera iwe?
Fitbit Versa 3 ongororo: Zvinoshungurudza padyo nekukwana
Fitbit Charge 4 ongororo: Iyo yakanakisa wristband kugwinya tracker?
Yakanakisisa yekumeso trackers 2020: Zvepamusoro zviitiko mabhagi kutenga nhasi
Fitbit Versa 2 ongororo: Ingori pfupi yehukuru
VirtualBox inoratidza Black screen uye kwete Booting muenzi OS
Maitiro Ekugadzira 3-Way Call pa Android mu8 Nhanho Diki
Xiaomi inokutendera kuti uchinje iyo boot animation uye yekuchaja skrini muMIUI: Heano maitiro ekuzviita pasina mudzi!
Maitiro Ekugonesa Hibernate Mune Windows 11 Kutanga Menyu
Dhawunirodha MUI mutauro mapakeji e Windows 10 Vakai 15048
Gadzirisa MIUI 12 Bug Inoita Kuti Mifananidzo Inyangarike Kubva Kumba Screen
Chii chinonzi EFI? Maitiro ekuziva EFI System Zvikamu pa Windows 11 / 10?